umlilo wobumba crucibles - XTL
umlilo wobumba crucibles
Usendaweni efanele ye- umlilo wobumba crucibles.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
Ivumela ukumuncwa umjuluko esikhundleni sokumuncwa, okugcina abaleleyo bepholile futhi bomile ebusuku..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu umlilo wobumba crucibles.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
I-Wholesale izinga lokushisa eliphezulu lomlilo crucibles ngenani elihle - XTL
Izikhilimu zobumba ezinokushisa okuphezulu okushisa ezisetshenziswa kabanzi kumalabhorethri ezimayini, I-Metallurgical Plant, nezinye izindawo zokuhlaziywa kwesampula yensimbi. Ukukhethwa kwethu kwe-fire assay crucible yekhwalithi ephezulu ye-alumina bauxite, i-mullite, i-kaolin njengempahla eluhlaza enokwakheka kwesayensi nobuchwepheshe obuthuthukile. Okuqukethwe okuphansi kakhulu kwezinto zegolide nezesiliva kungenza imiphumela yokuhlola inembe kakhulu.